Ahoana no hijerena ny backlinks dofollow amin'ny 2018?
Rehefa manova ny algorithms amin'ny laharam-pivoarana foana ireo fitaovam-pikarohana ary manome fanampim-baovao vaovao, maro ireo webmasters no manontany tena raha mila vola amin'ny famolavolana rakitra dofollow izy ireo na tsia. Raha jerena ny fanavaozam-baovao farany nataon'i Google Penguin sy Panda, ny tompon'ny tranonkala dia manana ahiahy mikasika ny herin'ny rohy dofollow amin'ny 2018. Ity lahatsoratra ity dia natao hamongorana ny hevi-diso rehetra momba ny herin'ny rindran-damina ary hampianatra anao ny fomba hanamboarana rindran-damina tsara indrindra amin'ity taona ity sy ny taona manaraka.
Backlinks eo imason'ny fiara fitadiavana
Hatramin'ny niantombohan'ny tantaran'ny fikarohana, ny rindranasa dia ampahany manan-danja amin'ny algorithm. Voalohany indrindra, nanompo izy ireo mba hahita votoaty vaovao ary manitsy ny fahefan'ny rakitra iray. Na izany aza, tamin'ny voalohany, Google dia nanombantombana ny isa misy ny rindran-damina nefa tsy manisy fiheverana ny kalitaon'ny loharano avy aminy. Ny loharanom-baovao azony kokoa, ny ambony kokoa ny fahefany eo imason'ny milina fikarohana. Amin'izao fotoana izao, ny rohy backlinks dia ampiasaina amin'ny fijerena ny votoaty vaovao na vaovao vaovao ary koa ny laharam-pahamehana amin'ny fisiahana.
Mba hisakanana ny fanitsakitsahana ny tsaratsara rehetra sy ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny fikarohana, Google dia nametraka Google Guidelines fa anisan'izany ny fomba fanao mampifandray tsara indrindra. Tsy niova firy ireo fitsipika ireo. Na izany aza, ny hetsika webmaster rehetra natao hanodinana ny lisitry ny vohikala dia mendrika ny hosaziana amin'ny sazy henjana Google.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny mozika fikarohana, dia maro ireo orinasa mitady fomba samihafa hahazoana rohy. Nanandrana ny hahita fandresena fohy ireo Webmasters mba hahazoana toerana ambony ao amin'ny Google SERP. Vokatr'izany, tranonkala izay tsy mendrika ny hanome toerana ambony TOP Google nahazo ny alàlan'ny fandraisana andraikitra amin'ny fanitsakitsahana ny Google Webmaster Guidelines. Nanomboka fanombohana fivarotam-pivarotana lehibe sy fivarotana amin'ny tsena nomerika izany. Vokatr'izany, ny indostrian'ny fanadiovana fikarohana dia nanapaka teknika fananganana rohy mahomby, toy ny fametrahana hafatra, famoaham-baovao, lahatsoratra dokambarotra, fanehoan-kevitra amin'ny blaogy, lahatsoratra sosialy, lahatsoratra forum, sns.
Amin'izao fotoana izao, Google dia mbola mitaky ny rindran-kaonty handoavana ny tompon'ny tranonkala na tsy handalo PageRank.
Tamin'ny taona 2012, nametraka ny algorithm an'i Penguin Google i Google, araka izay trangam-bokatra rehetra navotsotra rehetra ary nosoratan'ireo tranonkala izay namorona azy ireo. Tamin'io taona io i Google dia namorona fitaovana hanilihana ny Google Search Console mba ahafahan'ny tompon'ny tranonkala hanala ny ratsiram-pahaizana tsaran'izy ireo mahantra ao anaty tsindry iray.
Araka ny hitanao hatrany am-piandohana, ny fomba fijerin'i Google dia ny tsy hananganana rohy hanamafisana ny laharana amin'ny karoka fitadiavana. Maro ireo webmasters tsy manana traikefa no nanapotika ity politika ity, ary ny sazy an-dalam-pitenenan'ity politika ity amin'ny hoe "Google dia manohitra ny fananganana rohy na rohy fananganana dia tsy mendrika ny famatsiam-bola intsony". Mba hisorohana ny zava-miseho, Google dia tsy manohitra ny backlinks. Mifanohitra amin'izany kosa, mampiasa tranokala ho toy ny kritim-pifanarahana amin'ny kritika 200 hafa i Google. Na izany aza, miasa mafy i Google mba hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa. Izany no mahatonga an'i Google tsy mitsahatra miady amin'ny fanodikodinam-peo mba hanomezana karoka afa-tsy ireo tranonkala sarobidy misy ifandraisany amin'ny votoatin-kevitr'izy ireo Source .